Top 10 tựa game nhà hàng hay nhất dành cho điện thoại di động | Muasalebang - Muasalebang
Top 10 tựa game nhà hàng hay nhất dành cho điện thoại di động | Muasalebang
Đang Đọc: Top 10 tựa game nhà hàng hay nhất dành cho điện thoại di động | Muasalebang in Muasalebang
1 IKHEFU LAMI
2 UMGWAQO WOKUDLA
3 INDAWO YOKUDLA
5 UHLANYA CHEF
6 UKUPHEKELA USHINE
7 UKUPHEKA IPHUPHO
8 I-CAFELAND – IKHISHI LOMHLABA
9 ISIDILI SAMI
10 I-PIZZA ENHLE, I-PIZZA ENHLE
I-CAFÉ YAMI iwumdlalo okhangayo onezithombe ezinhle nomdlalo othokozisayo. Ithuthukiswe futhi ishicilelwe yi-Melsoft Games ukuze ilandwe mahhala ku-Google Play. Umdlalo ulingisa njengomphathi wesitolo, lapho uzoba umphathi futhi wenze izinto eziningi ukuthuthukisa isitolo sakho. Emdlalweni, kufanele uphathe ikhefi encane futhi ifana ne-Homescapes Mobile, igeyimu yakho yokuphatha indlu. .
Ekuqaleni, uzoqala ibhizinisi ngemali encane yemali. Okwanele nje ukuthenga izinto eziyisisekelo ukuze usize ikhasimende elidayisayo. Ukusuka lapho, kufanele uzame ukwenza ibhizinisi elihle futhi uguqule leyo mali ibe inzuzo enkulu yokwandisa indawo yokudlela. Nokho, ukuqhuba ibhizinisi akulula. Emdlalweni i-My Cafe, nakanjani uzoba nobunzima bokuthola izinhlamvu zemali zokuqala. Ukuthengwa kwezinto zokusebenza kanye nefenisha kuzokhawulwa yizinsiza zezimali eziphansi. Ngaphandle kwalokho, ukwenza ibhizinisi kulula ngempela uma uhehe isizinda samakhasimende esizinzile futhi unabasebenzi abaningi.
Isixhumanisi sokulanda se-Android
Isixhumanisi sokulanda se-iOS
I-Food Street iwumdlalo wokulingisa nowokuphatha ovumela abadlali ukuthi badizayine futhi bahlobise indawo yokudlela engezabo, i-Food Street iyindawo yokuthi ubonise amakhono akho okwakha nawokuphatha ukuze ulethe ibhizinisi lakho esikhathini esizayo.
Ukujoyina i-Food Street, abadlali bazohlangana nabalingiswa abathokozisayo njengabapheki, abalindi kanye nezivakashi ezinzima. Umsebenzi wakho ukukhetha izithako ezintsha zokupheka izitsha ezinomsoco ezikhanga abadla abavela kuwo wonke umhlaba. Ngaphandle kwalokho, abadlali begeyimu yerestshurenti ye-Food Street nabo abakhohlwa ukuhlanganyela emdlalweni ngokuvakashela izindawo zokudlela zabangane, ukuthenga nokudayisa izinto nokuzijabulisa. Ufuna ukuheha izivakashi eziningi ukuthi udle, udinga ukutshala isikhathi nemali ukuhlobisa indawo yokudlela. Udumo nenzuzo kuzoza endaweni yokudlela ngokwayo ngemisebenzi yokupheka, isevisi yamakhasimende, imikhosi yokudla…
Ikakhulukazi, i-Food Street ikuvumela ukuthi wenze ngokwezifiso abasebenzi futhi unikeze amakhasimende akho, ubenze baneliseke ngesevisi endaweni yokudlela. Futhi hweba ngezithako nezitsha nabangane noma abadlali bangempela. Joyina Iklabhu Yokudla futhi uqhudelane emiqhudelwaneni yokupheka enobungani. Noma joyina umcimbi wesizini ukuze upheke izitsha ezintsha futhi ube nemihlobiso enetimu.
I-Tasty Town iwumdlalo wepulazi ongcono kakhulu wokuhlanganisa insizakalo yesikhulumi Seselula okufanele uzame, lapha uzofunda ukuphatha, kanye nokusebenzela amakhasimende ngendlela ezinikele kakhulu. IDolobha Elimnandi lihlala lilandela isiqubulo esithi ungavumeli amakhasimende alambe noma azohamba, emdlalweni uzama ukuba uweta okahle, umphathi wendawo yokudlela okahle, umlimi odlamshane nokunye okuningi. Izinto ezengeziwe zilinde ukuthi uthole.
Umsebenzi wakho oyinhloko ukudala ukudla okuningi, ungakudala kusuka emapulazini, ungakwazi ukuvuna ukolweni, ummbila, ingulube, amaqanda enkukhu, .. nezinye izilwane eziningi kanye nezilwane.Ezinye izitshalo zikhiqiza ukudla. Ukusuka lapho ubaletha endaweni yokudlela bese ulungisa zonke izinhlobo zokudla okwenziwa umpheki wakho, kusukela kubhekeni, ikhekhe, amaqanda athosiwe anenyama, … nezinye izitsha eziningi ezikhangayo okuzodingeka uqondise umpheki wakho onethalente ukuthi azenze.
Xem Thêm Realme 6 - Giá rẻ, ưu đãi hấp dẫn, trả góp 0%, BH 12 tháng | Muasalebang
Futhi unendawo yokudayisa ogwini lapho uzothengisa khona amasoda, ama-hot dog, ama-hamburgers nokunye. Iseshini yokuthengisa izoba matasa kakhulu, ikwenze uzizwe sengathi uyahlanya, ngoba amakhasimende amaningi azokulinda ngesikhathi esithile, uma isikhathi sesiphelile azohamba futhi kufanele ukhonze amanye amakhasimende. . Ngempela, isipiliyoni somdlalo sisondele kakhulu empilweni yangempela, uzofunda ulwazi oluningi kumdlalo weDolobha Elimnandi.
Ekuqaleni, umdlali uzodlala njengompheki oyimfundamakhwela onamakhono amancane okupheka futhi angabi nolwazi oluningi lwasekhishini. Ngemuva kwesikhathi sokujwayela ukudla kanye nezindlela zokupheka, kancane kancane uzoba umpheki oqeqeshiwe, okwazi ukwenza izitsha ezimnandi ezidumile futhi ezamukelwa abadlayo emhlabeni wonke. .
Uma usuphenduke umpheki odumile, umdlali uzoqala ukwakha indawo yakhe yokudlela esezingeni eliphezulu etholakala endaweni ephambili edolobheni. Umsebenzi wakho ukugcina isithunzi nokuhlonishwa kwendawo yokudlela, ukwanelisa izidingo zokupheka zezivakashi ezidinga kakhulu.
Sebenzisa ukunambitheka kwakho nethalente lokuklama ukuhlobisa indawo yokudlela ewubukhazikhazi efanelekela ileveli yezinkanyezi ezi-5. Ingabe udinga ukudla okusha nokumnandi ukuze ukupheke? Lima izitshalo nemifino khona kanye engadini yakho ukuze unikeze indawo yokudlela. Ungakhohlwa ukwakha inethiwekhi yabapheki nabangani abakulo mkhakha, nishintshisane ngezitsha nezithako ndawonye, ​​babasize bapheke futhi bavune izitshalo…
Pheka ngokushesha futhi ujabule kumdlalo wokuphatha indawo yokudlela omlutha u-Crazy Chef. Thuthukisa ngobuhlakani izitsha zokudla nekhishi ukuze udlule emazingeni ngokushesha! Pheka, nikeza amakhasimende ngokushesha nangesikhathi ukuze uthole amathiphu engeziwe! Dala ama-combo ukuze uthole izinhlamvu zemali ezengeziwe ukuze uthenge izithako!
U-Crazy Chef unikeza isipiliyoni sokupheka esijabulisayo sabathanda ukupheka, amazinga amaningi ukukusiza ube umpheki ochwepheshe njengokuthosa, ukubhaka, ukubilisa, ukuthunga ngesitimu, uku-sautéing, okuhambisana nezithako ezinothile ukuze wenze ukudla okumnandi, izindlela zokupheka ezinhle kakhulu zokudala izitsha ezimnandi zamakhasimende. . Ngaphezu kwezitsha ezimnandi nezidumile, ukwenza iziphuzo kubuye kube yingxenye yendawo yokudlela ukuze kunikezwe kangcono amakhasimende, amawayini akhethekile, ikhofi, i-coke, noma iziphuzo ze-dessert ngemva kokudla. ukudala izitsha okumnandi.
Dlala i-Crazy Chef, zama ukuzuza uhlamvu lwemali oluningi ngokuqoqa imali kumakhasimende ukuze uthenge izitsha, izinto zokuhlobisa indawo yokudlela, izinto zasekhishini, nezinye izinsiza. Umdlalo futhi unesilinganiso okufanele usihlole. umdlali uba umpheki wezinkanyezi ezi-3, uyadlala Umdlalo we-Crazy Chef uzokusiza ukuthi uthole ulwazi olwengeziwe ekuphekeni, ngaphezu kwalokho, ungalanda futhi uzwe isihloko esithokozisayo esibizwa ngeMonster Chef ngokulawula zonke izinhlobo zamakhanda I-Monster Chef futhi ujabulele izitsha ezidalwe yilezi zinhlobo ngokwazo, iMonster Chef inomlando wendaba othokozisayo, izindlela zokupheka eziningi ongazithola.
Xem Thêm OPPO A91 | Giá bán, chính hãng, cấu hình, đánh giá | Muasalebang
I-Cooking Fever ngumdlalo webhizinisi wokudlela oshisayo oshisayo wamaselula. Umdlalo ungowohlobo olubukhali lokulingisa lwe-2D, olufanele labo abathanda ukupheka nabathanda ukudla. Akuyona imininingwane exakile futhi engokoqobo njengamanye amageyimu okulingisa adumile (imvamisa uchungechunge lwe-Sim), itimu yegeyimu injengoba igama liphakamisa: ehlobene nokupheka nokuphatha indawo yokudlela.
Umsebenzi womdlali ku-Cooking Fever uwukukhombisa amakhono akhe okupheka ukuze aqinisekise ukuthi izindawo zokudlela ezingu-12 kusukela e-Bakery kuya ezindaweni zokudlela ezigxile ekuphekeni okunosawoti omningi, kwasolwandle, kwase-China nase-Mexican. Kuwo wonke umdlalo umsindo ongemuva ojabulisayo, ohlanganiswe nomsindo “ocwebezelayo” lapho ukosa inyama, noma umsindo wokwengeza isoso kachili ku-hot dog, noma umsindo “wezinhlamvu” wezinhlamvu zemali,… ngakho umoya uyaphithizela endaweni yokudlela yangempela, enikeza abadlali izikhathi ezinhle zokuzijabulisa.
Ukupheka Iphupho ngumdlalo wokupheka othokozisayo walabo abathanda umsebenzi wasendlini, lapho uzofunda khona izindlela zokupheka zokudla okumnandi ezivela emhlabeni wonke, futhi ngesikhathi esifanayo ukukunikeza ulwazi olubalulekile mayelana nokupheka.ukupheka ubuciko. Ukupheka Iphupho kuphinde kube yithuba lokuthi uzame isandla sakho ekubeni umphathi wendawo yokudlela, uthathe ama-oda avela kwabanye abantu futhi ubaphakele ukudla okumnandi.
Ukupheka Iphupho kukusiza ukuthi ufeze iphupho lakho lokuba umpheki ohamba phambili emhlabeni, uphathe eyakho indawo yokudlela lapho kufanele ugcwalise khona imiyalo yamakhasimende futhi udale izitsha ezimnandi ezihlukene endlini eyodwa. Isitolo sihlala simatasatasa. Umgomo walo mdlalo ukuthi kufanele wenze inzuzo eningi ngangokunokwenzeka ekukhonzeni amakhasimende, umsebenzi wakho kuyoba ukusebenzisa izithako ezintsha ukuze udale izitsha ezimnandi ngokuvumelana nezindlela zokupheka ezitholakalayo ezifana ne-pizza, inkukhu ethosiwe, ama-fries ama-french, amakhekhe.
Ukupheka Iphupho futhi kudinga ukuthi uhlobise futhi uthuthukise indawo yokudlela ukuze uhehe amakhasimende amaningi, uthenge izinto zokusebenza zasekhishini ezisezingeni eliphezulu njengomshini wekhofi noma uhhavini. Ngokungeziwe ekudleni okudumile, dala umehluko endaweni yakho yokudlela njengeziphuzo ezihlukile ukuze unikeze amakhasimende akho umuzwa womuntu siqu. Lo mdlalo futhi unikeza i-ssoo minigame ehehayo ongayidlala futhi ikunikeza izinzuzo ezithile.
I-CAFELAND – IKHISHI LOMHLABA
I-Cafeland World Kitchen iyisikulingisa sokupheka kanye nomdlalo wokuphatha ikhaya lapho ungakha khona uhlobo lwakho oludumile lwe-culinary, e-Cafeland World Kitchen uzojwayelana nezindlela zokupheka ezihlukile ngasikhathi sinye. Funda ukuthi ungayiphatha kanjani indawo yokudlela kahle.
Ekhishini Lomhlaba lase-Cafeland le-Android, imenyu inedlanzana lezidlo ezihlukene, okufaka phakathi ama-dessert, ama-appetizers, ukudla okusheshayo nokunye ukuze wenze ukuzizwisa kwegeyimu yakho yasekhishini kuphelele. Ingabe usukulungele ukuba umnikazi wesitolo esidumile se-Culinary? Ukuheha inqwaba yamakhasimende nokwenza isitolo sidume akuyona into elula, kudinga ukuthi abantu babe nesu elifanele lebhizinisi. Joyina i-Cafeland World Kitchen ye-iPhone, okokuqala kufanele uhlobise futhi udizayine isitolo samaphupho uwedwa, uqondanise nesitayela sakho nezinto ezithandwa ngamakhasimende akho. Okulandelayo ukupheka ukudla okumnandi ukugcina amakhasimende ebuya.
Xem Thêm Tết Nguyên đán 2018: Danh sách 30 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa ở Hà Nội | Muasalebang
I-Restaurant Fever iphinde ibe umdlalo othokozisayo walabo abathanda ukupheka futhi abafuna ukwakha izitsha ezihlukile, umdlalo weRestaurant Fever unezithombe zentsha kanye negeyimu elula, elungele ukuzijabulisa ngaso sonke isikhathi. yonke indawo.
Indawo yokudlela yami iyisiphakamiso esihle kakhulu kulabo abathanda imidlalo ethokozisayo yokwakha indawo yokudlela ocingweni. Nakuba ingashisi njengemidlalo eshiwo ngenhla, isaziswa kakhulu ngabasebenzisi ngakho kokubili ikhwalithi nezithombe. Indawo yokudlela yami inomdlalo olula, ohlanganisa ukupheka, ukuklama nokuphatha indawo yokudlela. Imenyu inothe ngokwedlulele, igcwele izitsha ezidumile ezivela kulo lonke izwekazi. Umdlalo ulingisa ngokwangempela indawo yokudlela enezinkanyezi ezi-5, uhlelo lombala oluvumelanayo, umsindo ojabulisayo.
Ngaphezu kokuba umpheki, ubuye uzwe umuzwa wokuba umklami wangaphakathi wendawo yokudlela yakho. Isici esiyingqayizivele salo mdlalo ukuhlinzeka ngendawo yegumbi ehlukile yomlingiswa ngemva komsebenzi. Kuyabonakala ukuthi unjiniyela ucophelela kakhulu ekwakheni igeyimu, ucophelela emininingwaneni emincane kakhulu. Ngokuza endaweni yokudlela Yami, abadlali bazokhululeka ukuba baphishekele intshiseko yabo yezokupheka, babe umnikazi wendawo yokudlela ewubukhazikhazi onesitayela somuntu siqu.
I-PIZZA ENHLE, I-PIZZA ENHLE
I-Pizza Enhle I-Pizza Enhle ngumdlalo wokupheka onomsebenzi wokuphatha nokusebenzisa ukusebenza kwesitolo sakho se-Pizza, uthatha ama-oda avela kwabanye abantu futhi uwagcwalise ukuze uthuthukise futhi uthuthukise isitolo sakho kakhulu. I-Pizza Enhle I-Pizza Enhle futhi idinga abadlali ukuthi benze indima yompheki, benze amaqebelengwane amnandi anambitheka amaningi ahlukene ukuze baphakele izidlo.
I-Pizza Enhle I-Pizza Enhle ikusiza ukuthi ufeze iphupho lakho lokugijima nokuba nesitolo sakho se-pizza, uthatha ama-oda ezitolo eziningi zokudla, udale ama-pizza amnandi ngokwezicelo zamakhasimende. I-pizza yakho yenziwe ngezithako ezitholakala kalula. Kukhona ukunambitheka okuningi okuhlukahlukene okufana ne-pizza yezilwane zasolwandle, i-pizza yemifino, i-pizza yenkukhu… kwengezwe okokugcotshwa kwe-pizza okuhlanganisa i-pepperoni, isoseji, u-anyanisi ukuze inhle futhi yenze ikhekhe libe elikhethekile. .
I-Pizza Enhle I-Pizza Enhle ilingisa ngokunembile inqubo yokwenza i-pizza ngokuxova inhlama, ukubumba ikhekhe, ukungeza i-topping nokufaka kuhhavini, ukwandisa amakhono akho omama bamakhaya usuku nosuku, umdlalo uhlanganisa nephepha lezindaba lePizza News Network elihlinzeka ngolwazi lokuqala konke okuhlobene ne-pizza. Ama-oda avela kumakhasimende azoletha inzuzo esitolo sakho, imali isetshenziselwa ukuthuthukisa isitolo, izinto zokusebenza ukukusiza ube umpetha we-pizza.
Tai nghe Xiaomi True Wireless Earbuds Basic 2 | Muasalebang